बुहारी भन्दैथि'न् , 'अब त यो पैसोले घरमा टिन् � ोक्नु पर्छ बुढा । सप्पैका टिनका छाना भैसके ।'
'� ोकुम्ला न । अलिकति बारी पनि जोड्न पर्ला भनेर सम्जे'थेँ मैले त ।' � ुलै भाग्यशाली चि� ्� ा हातपरेको रवाफ थियो सन्तमानको ।
त्यतिञ्जेल सुखमानको करेसामै उक्लिसकेका थिए उनिहरु । छिमेकी बिजुवा बाले थपे , 'यत्रो बिधी पैसो पा'असि जे जे गरे नि भो नि अब । बाह्र वर्षमा त खोलो पनि फिर्छ भनेको � ्याक्कै पुग्यो सन्तमान भाइ तिमीलाई ।'
हातको स्याउला अझै हातमै लिएर मुर्ति जस्तै � िङ्ग उभिएको सुखमानलाई देखेर सन्तमानले उभिएरै भन्यो , ' ए दाजै , सरकारले ३ लाख रुप्पे दिया छ हाम्लाई क्षेतिपुर्ति......... '
उनिहरु फटाफट उसको करेसो कटेर उकालिए । सुखमानलाई भन्को छुटे झैं भयो । हातको स्याउला फ्यात्त फालेर उ बस्तुको किलो समाएर घाँस हाल्न तेर्स्याएको ढाटमा बस्यो । उसको भाइ सन्तमानका तिनभाई छोराहरु । ति मध्ये माईलो लडाईंमा परेर मरेको बेला उसले सम्झाएथ्यो , 'ए नरोउ अब । रोएर मरेको मान्छे फर्कँदैन । तिमरका त अरु दुईभाइ ज्युँदै छन् । मेरो यौटै भ'को नि लडाईंमै गा'छ । मरेको त मरिगो बाँचेकाको मुख हेरेर मन बुझाओ ।'
'...यो पैसोले घरमा टिन् � ोक्नु पर्छ... ' बुहारीकै कुरा उसको कानमा फेरी आएर पस्यो । उसले आफ्नो छानो सम्झ्यो । बर्खामास झरीमा सुत्दा ओच्छ्यानमा चुहेको पानी थाप्न भाँडा राखेको सम्झ्यो ।
'हैन के भन्छौ ए काजीका बाउ ? तिमीलाई छोरोभन्दा पैसो � ुलो हुने भो अब ?' श्रीमतीको तिखो आवाजले झसङ्ग भयो सुखमान । उसले पुलुक्क हेर्यो काजीकि आमा नजिकै दाउरा झिक्दै थिईन् ।